बुटवलमा २ थपिए ,कोरोनावाट मृत्यू हुने ९ सय कहाँ गए ? | Press Pati
बुटवलमा २ थपिए ,कोरोनावाट मृत्यू हुने ९ सय कहाँ गए ?
२०७७-०८-०५ ०८:०९ मा प्रकाशित
रुपन्देही ५ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या र नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको संख्याबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म नेपाली सेनाको जंगीअड्डालाई विभिन्न पृतनाहरुले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २ हजार १७९ जना मृतकको शव व्यवस्थापन भइसकेको छ । यही समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने एक हजार २७६ जनाको मृत्यु भएको अपडेट वेबसाइटमा दिएको थियो ।
यो आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको तथ्यांक ९०३ जनाले फरक रहेको पाइएको छ । यसअघि ३० असोजमा नेपाली सेना र स्वास्थ्यको मृत्युसम्बन्धी रेकर्डमा अन्तर रहेको विवरण अनलाइन समाचारमा प्रकाशित भएपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले चासो देखाएको थियो ।यता रुपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा रुपन्देही र गुल्मीका थप एकरएकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । अस्पतालका अनुसार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–२ का ५९ वर्षीय पुरुष र गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–१ का ६६ वर्षका पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
उता पाल्पामा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । रामपुर नगरपालिका ५ की ५४ वर्षीया महिलाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास तानसेनमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको हो । मधुमेह र उच्च रक्तचापकी बिरामी महिला स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि कात्तिक १९ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।